musha More Formula One Drivers Bio Sergio Perez Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Our Sergio Perez Biography inokuudza chokwadi pamusoro penyaya yake yeChidiki, Upenyu Hwepakutanga, Vabereki - Antonio Perez Garibay (Baba), Marilu Perez (Amai), Mhedziso Yemhuri, Mukadzi (Carola Martinez), Vana (Sergio Perez Jr. uye Carlota Pérez Martinez) .
Kunyanya zvakadaro, iyo Formula YeMutyairi Vanin'ina (Paola Pérez naAntonio Pérez), Mararamiro, Mari, mari yakakosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Mukutaura kwakareruka, basa pano ndere kuburitsa pachena zvakadzama zveiyo Mexican Formula One mutambi. Nyaya yedu inotangira kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika pakuve anozivikanwa.
Kuti uwedzere nyota yako yehupenyu, tarisa iyo gallery yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwake kubva pakutanga.
Taona zvakakodzera kuti tikuunzire mapikicha ake eHupenyu Hwepakutanga uye Kubudirira. Pazasi pane nhanho-ne-nhanho snapshot yeSergio Pérez's biography.
Sergio Pérez Biography: Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Ehe, isu tese tinomuziva kuve akabudirira kwazvo mutyairi weMexico munhoroondo yeFormula One naRed Bull. Kumhanya kwake uye mujaho unotyisa unoita kuti vateveri vake vari kukura vafare nguva dzose.
Naizvozvo, isu takafunga kuti zvine hungwaru nemufaro wese kukuunzirai inonakidza ngano yaSergio Pérez uye kuparara kwezviitiko zvemujaho. Saka, pasina kumwezve kunonoka, ngatitangei.
Sergio Perez nyaya yehucheche:
Kune vanotanga biography, ane zita remadunhurirwa rekuti Checo.
Sergio Pérez Mendoza akauya munyika ino pazuva re26th raJanuary 1990 kuna amai vake, Marilu Pérez uye baba, Antonio Pérez Garibay, muGuadalajara, Jalisco; guta riri muMexico.
Iyo Formula Imwe prodigy akazvarwa semwana mudiki pane vamwe vaviri vanun'una (Sergio Pérez Jr. naCarlota Pérez Martinez).
Sergio Pérez nevanin'ina vake vaviri vese vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vavo (Marilu Pérez naAntonio Pérez Garibay), vane mufananidzo uri pazasi.
Tarira vabereki vaSergio Pérez - amai vake, Marilu Pérez nababa vake, Antonio Pérez Garibay.
Mujaho weMexico aingova nemakore matanhatu paakatanga basa rake muKarting mu1996. Kuda kwake kunofanira kunge kwakave nekuona vakoma vake (Antonio Pérez) vachiita mujaho.
Mufananidzo wehudiki waSergio Pérez, uye munin'ina wake, Antonio Pérez.
Pa7, akatora chikamu muKarting Vechidiki kirasi muna 1997. Zvino, nezera ramakore mapfumbamwe, Sergio akange ave kutomhanya mumitambo yekuchinjanisa, achiwana kukunda kumwe kare mugore rake rekutanga reboka rejunior. Akabata nzvimbo yekumhanyisa mukirasi.
Sergio Pérez ndiye aive mutyairi mudiki pane vese muchikwata, uye akazove mutyairi mudiki kuve shasha yekirasi.
Hupenyu hwake hunopfupikisa kuti mukana unosangana sei nezvinozoitika; Izvi zvinodaro nekuti akaberekerwa mumitambo.
Mufananidzo wekutanga weSergio Pérez.
Sergio Perez Mhemberero Yemhuri:
Kutanga, baba vaSergio, Antonio Pérez, vakambova Car Racer pachake.
Mujaho waakadzidzira kwechinguva asati ava maneja wemutyairi wemotokari yemitambo, Adrián Fernández. Mhuri yacho yaingova nezvakawanda zvokuita kuti mhuri iwane zvinodiwa zvinokosha.
Zvichakadaro, amai vaSergio, Marilu Pérez, vaitarisira imba. Akavimbisa kufamba kwakanaka kwemba uye kugara zvakanaka kwevana.
Sergio Perez Mhuri Yakatangira:
Seizvo zita rinoratidza, Sergio Perez haasi Chirungu. Zita rake "Pérez" rinoratidza dzinza reSpain. Iri izita reCastilian Spanish. Pérez zvinoreva "mwanakomana waPero kana Pedro (Peter)".
Sergio Pérez akaberekerwa uye akarererwa muGuadalajara, guta guru reJalisco, kuMexico.
Isu tinoziva zvakanyanya dunhu seHispanic kana Spanish America, ese ari muLatin America yakakura. Spanish ndiwo mutauro unonyanya kushandiswa pakati pemimwe muLatin America.
Nekudaro, kune izvi zvekunyora-kumusoro, tinogona kufunga kuti Sergio Pérez ndeweMexico uye weSpanish Ethnicity. Pazasi payo pikicha inoratidza iyo midzi yemoto weFormula One racer.
Mepu inoratidza mhuri yaSergio Pérez.
Sergio Perez Hupenyu hwepakutanga muMotorsports:
Kunyangwe hazvo Sergio Pérez anga achimhanya kunge makore matanhatu, aive nemakore gumi nemana paakaita mota yake mujaho muUS-based Skip Barber's Midwestern single-seater akateedzana muna 14.
Mujaho wekumhanya waive nerubatsiro rwemabhizimusi weMexico, Carlos Slim's Escuderia Telmex.
Nekuda kwekuita kwake uye zera diki, shasha yekumhanyisa yakagamuchira zita remadunhurirwa rekuti "Iyo Mexican Wunderkind"
Kuita kwake uye zera diki, kuzvarwa zita remadunhurirwa rekuti "Iyo Mexican Wunderkind".
Sergio Perez Dzidzo:
Kumumhanyi akatanga basa rekutanga kudaro, dzidzo yechikoro yairatidzika kunge isiri madikanwa.
Nekudaro, nzira dzakagadzirwa dzedzidzo yake, kunyanya pahunyanzvi hwepfungwa uye chikafu chakakosha uye ruzivo rwedzidzo yehutano.
Unyanzvi hwepfungwa hunosanganisira hunhu hwakadzidza hunoshandiswa nevatambi vakaita sekurudziro, kuzvivimba, kumutsa kutonga, uye hukama hwehukama. Sergio Pérez mota yekumhanyisa mota yakaitika muBritish Formula 3's National kirasi muna 2007.
KuBritish Formula 3's National kirasi muna 2007.
Sergio Perez Biography - Mugwagwa weMukurumbira Nyaya:
Muna 2005 mutambi wenhangemutange wekuMexico akatamira kuEurope kunokwikwidza muFormula 1 BMW, achipedza ingangoita mwedzi mina achigara muresitorendi yaive nemubati wechikwata chake.
Pa17, akatamira kuOxford kunotanga mushandirapamwe wemakore maviri muBritish Formula 3.
Achiri ikoko, akahwina iyo National Kirasi (yevakuru chassis) muna 2007 uye akapedza wechina muInternational Class muna 2008.
Akanga achienderera mberi achipedza kudzidza kuFormula 1 feeder akateedzana GP2 kuburikidza neGP2 Asia Series. Saka, akataura kukunda mumujaho wake wekutanga muBahrain.
Pamujaho wake wekutanga muBahrain.
Isu tinomuziva zvakanyanya semurwi nekubata zvinyoro. Sergio murwi wepunchy; iye anorwira nzira yake kuburikidza nepakeji uye mumapoinzi, semhedzisiro, vari kuhwina mwoyo yevafudzi vake vari kusimuka.
Sergio Perez Biography - Iyo Yakabudirira Nyaya:
Parizvino, akaunganidza mapoinzi akawanda kupfuura chero imwe yeMexico munhoroondo yeF1.
Mushure mekutambira zvikwata zvakasiyana seFormula yekutanga, kutanga naSauber (2011-2012), McLaren muna 2013, Force India (2014-2018) uye Racing Point (2019 -2020).
Perez anopemberera yake yekutanga podium kuMalaysia 2012.
Muna 2020, iyo Guadalajara Star yakahwina mukombe wayo wekutanga muSakhir Grand Prix yegore rimwe chetero.
Kuhwina kwaive chinyorwa chisina kujeka chakaputswa naSergio Perez; the kukunda kwekutanga kwemutyairi weMexico kubvira Pedro Rodríguez akahwina 1970 Belgian Grand Prix makore makumi mashanu apfuura.
Kukunda kwekutanga kwaSergio kubvira Pedro Rodriguez akakunda 1970 Belgian Grand Prix.
Yaive iyi Sakhir performance yakamupinza pfuti pazita neRed Bull.
Pazuva rechi18 raZvita 2020, Pérez akaziviswa semutyairi weRed Bull yemwaka wa2021 Formula 1, aine Max Verstappen semumwe wake. Akatsiva Alex Albon.
Mufananidzo newavo Red Red Bull, Max Verstappen.
Kufamba uku kwaive mubairo unonzwisisika nekuda kwemitambo yake inogutsa mumakore apfuura.
Nhau dzakanaka, zvisinei, ndedzekuti Checo Perez aratidzira kukosha kwake neRed Bull nekuhwina iyo 2021 Fomula 1's Azerbaijan Grand Prix uye mukwikwidzi kumira.
Humwe Kukunda kuri, zvakadaro, zvinotarisirwa. Iwo mavhidhiyo pazasi anopenda mumifananidzo yekusimuka kwake kuenda stardom.
Iwe unofunga Sergio Pérez ari mune chero hukama?:
Ehe, iyo yeGuadalajara inomhanyisa haisi muhukama chete asi zvakare inobatanidzwa mune mashoma akaomesesa. Sergio anga ari pane imwe nguva muhukama nemumwe panguva dzakasiyana.
Rudo rwake rwekutanga aive Greta Farias muna 2010, kozoti Fernanda Gallegos muna 2013.
Uye zvakare, Andrea Campillo Vivanco, anoti akaroora muna 2014 asi akazoparadzana. Pazasi pane rondedzero yezvavaitaridzika vese mumufananidzo.
Mufananidzo waGreta Farias, Fernanda Gallegos Andrea naCampillo Vivanco.
Kusiyana naizvozvo, Sergio akaramba kurasikirwa netariro pakuwana rudo rwehupenyu hwake. Kutsvaga ikoko kwakamuita kuti abatane naCarola Martinez.
Sergio Pérez akamukurudzira pa 13th zuva raAugust 2017 mushure mekunge vamboita nguva.
Pakupedzisira kuwana rudo rwehupenyu hwake, Carola Martinez.
Rinenge gore gare gare, mushure mekukumbira, Sergio Pérez naCarola Martinez vakasunga mafundo uye kuchinjana mhiko dzavo dzemuchato.
Vose maKristu eRoman Catholic. Nekuda kweizvozvo, mutambo wemuchato wakasimbiswa pasi paPapa Francis.
Papa Francis vachikomborera muchato wevaviri ava.
Carola Martínez isocialite kubva kuGuadalajara. Mumwe weakanyanya kufarira ari kufamba. Yakawanda yemifananidzo inowanikwa yekufamba kwake naSergio akaiswa pane yake Instagram mubato.
Nezve Vana Sergio Pérez:
Kunyangwe Mexican Formula One Champion akaroora muna 2018, mwana wekutanga wevaviri ava, Sergio Pérez Jr, akazvarwa pazuva re21st raZvita 2017.
Mwana akauya munyika vabereki vake vasati vaenda kuAtari.
Sergio Pérez nemukadzi wake nevana vaviri.
Zvakawanda gare gare, pazuva rechigumi neshanu raGunyana 15, vaviri ava vakakomborerwa zvakare nemwanasikana akanaka anonzi Carlota Pérez.
Vana vanowanzotarisa uye kufadza baba vavo pamujaho weF1.
Sergio Perez Jr naamai vake kuti vafare uye vatarise baba pane iyo F1 mujaho.
Sergio Pérez Hupenyu Hwemhuri:
Sezvinongoita cliche, "Hapana murume chitsuwa chake", sezvo Sergio Pérez aisakwanisa kuenda kure pasina nharaunda inogonesa yakagadzirwa nenhengo dzeimba yake.
Tichifunga izvi, ngatitorei nekukurumidza kupfupisa kweumwe neumwe wavo.
The Perez mhuri munguva yavo yeJoyous.
Nezve Baba vaSergio Perez:
Sezvambotaurwa, baba vaSergio, Antonio Pérez, vaimbova Car Race Champion. Yake Car racing mukwikwidzi yaive asati ave maneja wemutyairi wemitambo yemitambo, Adrián Fernández.
Zvakaringana kutaura kuti ndiye aive wekutanga kutyaira mune yemitambo basa revanakomana vake vaviri (Sergio Pérez naAntonio Pérez Jr.). Akaroora amai vaCheco, Marilu Pérez, uye vaviri vacho vane vana vatatu.
Mufananidzo wekukunda naSergio Pérez nababa vake, Antonio Pérez.
Nezve Amai vaSergio Perez:
Amai vaSergio vakaonekwa zvakanyanya mumufananidzo wefrenzy nevana vake, kunyanya naSergio Pérez. Zita rake rizere ndiMarila Pérez Mendoza.
Iye zvakare ndeweSpanish madzitateguru asi muMexico. Akaramba achimutsigira zvakasimba mukubudirira kwevana vake vose vatatu.
Mutyairi weMexico F1 naamai vake, Marila Pérez Mendoza.
Nezve Sergio Perez Siblings:
Sezvambotaurwa, Checo, anowanzo kushevedzwa nevateveri vake, ane vanun'una vaviri vakuru.
Antonio Pérez, ari mwana wekutanga wekubatana kwevabereki vake (Marilu Pérez naAntonio Pérez Garibay). Uyezve Paola Pérez, wechipiri mwana. Ona zvimwe zvakawanda pazasi.
Sergio nemukoma wake uye hanzvadzi.
Nezve Sergio Perez Hama - Antonio Perez:
Izvo zvinogara zvakajairika kuti mwana wekutanga ave mugari wenhaka pachigaro chehushe chero imba. Izvi zvinoshandawo kumhuri yaSergio. Zita remwana wekutanga uye wedangwe mumhuri yePererez ndiAntonio Pérez.
The Perez hama pachiitiko chemujaho.
Iye ane zita rababa vavo kuitira kuti tikwanise kunongedzera kwaari sababa vadiki kana Junior anogamuchirwa (Jr.) Iye Mutyairi Wemotokari Race, kunyangwe ave pamudyandigere. Kunyanya zvakadaro, akambotora chikamu muNASCAR Mexico Corona Series.
Nababa vaCheco, Antonio Pérez Garibay ndiye wekutanga kukurudzira naSergio uye mutungamiri. Antonio akaroora uye ane vana vatatu, sababa vake.
Antonio Pérez Garibay nemukadzi wake nevana.
Nezve Sergio Perez Sista - Paola Pérez:
Hanzvadzi yaSergio, Paola Pérez, ndiye ega mukadzi mukadzi mumhuri yePererez. Iye anotsigira munin'ina wake, Sergio, zvakanyanya sezvaanogona. Saka, pamwe naSergio, ivo vanotsigira Checo Pérez Foundation.
Chinangwa cheNon-governmental Organisation ndechekutsigira nherera nevana vane gomarara. Semunhu anonyanyisa mufashoni, ndiye zvakare muvambi weelclosetdepérez, kwaanotengesa akagadzwa anodhirowa dhizaini anopfeka, ese ari online nepamhepo.
Mufananidzo wehanzvadzi yaSergio Pérez, Paola Pérez.
About Sergio Pérez Relatives:
Mujaho weMexico Formula One Star anofanirwa kunge aine dzimwe nhengo dzemhuri dzakawedzerwa. Nekudaro, ivo vakangwara nezve icho chikamu chehupenyu hwavo. Asi, hongu, isu tinoziva zvishoma nezvemwanasikana wevakoma vake (muzukuru wake anonzi Antonella) uye nemuroora wake, Lupita.
About Sergio Pérez Relatives - Lupita:
Lupita anogovera zuva rekuzvarwa rakafanana nemukadzi waSergio Pérez. Ivo vakazvarwa pazuva re16th raZvita. Zvisinei, Lupita ane makore maviri akura.
Sezvineiwo, muchato waSergio naCarlota Martinez wakauya mwedzi mitatu nemazuva matatu mushure mekunge Lupita asunga banga. Ivo vese maMexico.
Carola Martinez (kuruboshwe) nemukoma wake mukuru, Lupita (kurudyi).
Sergio Perez Hupenyu hweMunhu kure neF1:
Inonyanya kuzivikanwa nekutsamwa kwake uye kuramba achitevedzera panguva yekumhanya, iyo Guadalajara mujaho mutyairi ane akati nyoro uye anotamba mativi. Kunze kwekumhanya mota, Sergio anofarira nhabvu nemitambo yeVhidhiyo.
Nguva yekunakidzwa inguva yevhidhiyo yemitambo.
Maitiro aanofarira emujaho anosanganisira iyo Autodromo Nazionale di Monza muItari, Circuit de Spa-Francorchamps muBelgium uye Circuit de Monaco muMonaco. Sergio anofarira kudya tortas, ahogadas uye pasta.
Mutambi weMexico ane huwandu hwakakura hwevatsigiri nevatsigiri pamapuratifomu ake enhau. Iye anoda vateveri vake uye anobatana navo kuburikidza neayo Instagram, Twitter, uye Facebook inobata, zvichiteerana.
Kusaina maAkisheni evateveri vake vane rudo.
Sergio Perez Mararamiro:
Izvozvi zvinoita sekunge Formula One yave bhirioni vakomana kirabhu.
Hushasha uye hukuru hunoyemurwa nevakawanda veFormula one mujaho hunotaura huwandu hwemafuta ekubhengi anofanira kunge achiverenga. Sergio haasunungurwe, pazasi pane mufananidzo weimwe yedzimba dzake dzepamusoro.
Mufananidzo weimwe yedzimba dzinodhura dzaSergio.
Mujaho weMexico uyu akaita mari zhinji kumhanya kumashure kwemavhiri. Pérez akahwina makwikwi mazhinji uye mibairo iyo yakasundira kukosha kwake panguva yese yebasa rake.
Iye chokwadi anoda mota dzakashama senge McLaren P1 uye Porsche 911 GT3 RS supercar yemumhanyi wemotokari. Nekudaro, chaanofarira ndeye Ferrari 458 uye Mercedes-Benz SLR McLaren.
Checo neMercedes-Benz SLR McLaren yake.
Sergio Pérez's Net Kukosha:
Mushure memakore gumi ekumhanya mujaho semutyairi weFormula One, Pérez akabudirira kugadzira mari inokatyamadza inosvika madhora makumi matatu emadhora, sekureva kwenhau.
Mubhadharo waSergio Pérez kuRed Bull F1 timu iri $ 8 mamirioni, ichimuita iye wegumi neimwe wepamusoro-anotambira mutyairi pane yazvino grid.
Nekudaro, Perez anoitawo yakawanda yakanaka mari kubudikidza nemazita endorsements. Telcel neTelmex, makambani maviri enhare, kwenguva yakareba, akatsigira mutyairi weMexico.
Saizvozvowo, aigara achigamuchirwa naClaro, Hawkers, nezvimwewo asi akapedza hukama hwake navo.
Sergio Perez Untold Chokwadi:
Kunze kwenyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino zvimwe zvisingawanzoitika nezve Sergio Pérez nebasa rake rekumhanya.
COVID-19 F1 Rekodhi:
Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti Perez aive iye kutanga F1 mutyairi kuyedza zvakanaka nezve COVID-19. Nekuda kweizvozvo, akashaya 70th Anniversary Grand Prix paSilverstone.
Ipapo akazotsiviwa paMjaho Point nemutyairi wekare weRenault Nico Nico Hulkenberg. Yaive vhiki rakaipisisa muhupenyu hwake, akadaro Sergio.
Vhiki rakaipisisa rehupenyu hwaCheco.
Anogona kunge ari Gweta:
Muhurukuro muna 2012, Pérez akazarura kuti angadai akada kuva gweta dai akanga asiri mutyairi Iwe unofunga kuti angave gweta rudzii?
Seizvo chirevo chinosanganisira, "zvirinani kupa pane kugamuchira." Sergio Pérez akagadzira chikuva chekudzorera kunzanga, zvichiita kuti nyika ive nzvimbo inogarwa.
MunaNovember 2012, akafumura Checo Pérez Foundation kutsigira nherera nevana vane gomarara. Hanzvadzi yake Paola aive purezidhendi wenheyo.
Checo Pérez Foundation kutsigira nherera nevana vane gomarara.
Sei Sergio Pérez achinzi 'Checo'?
Sezvineiwo, achipindura mubvunzo, Pérez akati, “KuMexico, kwandinobva, maSergios ese ane zita remadunhurirwa rekuti 'Checo'. Ndine urombo, hapana nyaya shure kwayo! ” tinovimba kuti zvakakusekesai.?
Sergio Perez Tarenda yegorofu:
Checo akatanga kutamba Gorofu aine makore gumi nemanomwe paakatamira kuEngland uye parizvino anotamba nehurema, izvo zvisina kuipa kune mumwe munhu anotamba Gorofu yake kwete kamwe chete pamwedzi mumwaka weF17.
Anotamba Gorufu yake isingapfuuri kamwe chete pamwedzi panguva yeF1 mwaka.
Sergio Perez Biography Pfupiso:
Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yenhoroondo yehupenyu hwake, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezve inozivikanwa yeMexico Formula One racer.
Sergio Pérez Biography Dhata
Zita rizere: Sergio Michel Pérez Mendoza
Zita rekudanwa: Checo, Iyo Wunderkind yeMexico
Zuva rekuzvarwa: 26 Zuva raJanuary 1990
Nzvimbo yekuzvarirwa: Guadalajara, Jalisco, Mexico
Baba: Antonio Perez Garibay
Amai: Marilu Perez
Vanun'una: Antonio Pérez (Hama) naPaola Pérez (Hanzvadzi)
Wife / Wawakaroora: Carola Martinez
Vana: Sergio Perez Jr., Carlota Perez Martinez
kukwirira: 5 ft 7 inches (1.73 m)
Net Worth: $ 30 mamirioni approx
Chitendero: Roman Catholic
Dzinza / Race: Mapepanishi
Tine tarisiro yedu kuti wakanakidzwa neSergio Pérez Biography uye Yehucheche Nyaya. Kunyangwe kuve mukuru muhupenyu hakunei nemunhu, kunyangwe vabereki, nekuti nhangemutange yehupenyu ndeye wega.
Iko chokwadi uye mukurumbira wababa vaSergio hazvina kumupa mvumo yekuzorora pazita rake raivepo. Bhuru tsvuku mujaho aifanirwa kugadzirisa rake ramangwana kunyangwe mabhureki ebatsiro uye Push.
Kwaive uku kuda uye kugadzirira kusvika kubasa, nerubatsiro rwuripo, izvo zvamusvitsa kure. Tinovimba wakawana chinyorwa ichi chichiburitsa pachena uye chizere nezvidzidzo.
Ita zvakanaka kuti ugare wakabatana kune zvimwe biography chokwadi nezveFormula One Drivers nekurongeka kwepamusoro-soro.